Waldaan Qulqullootaa sagantaa Televizhinii Afaan Oromootiin eegaluuf miidiyaa fi Komunikeeshinii Mijuu wajjin waliigaltee raawwate.
Barumsa amantaa, sirna Waaqeffannaa fi darbii darboo mana kiristaanaa afaan uummanni dhagahuun bal’inaan wangeela Waaqayyoo lallabuuf kan kaayyeffate Waldaan Qulqullootaa sagantaa Televizhinii Afaan Oromootiin eegaluuf akka ta’e himame. Waldaan Qulqullootaa sagantaa kana yeroo gabaabaa keessatti eegaluuf onkololeessa 5 bara 2008 waajjira gaggeessaa waldichaa keessattiwaliigaltee tamsaasa sagantichaa miidiyaa fi komunukeeshinii Mijuu wajjin raawwateera.
Akka waliigaltee irratti ibsametti komunukeeshiniinfi miidiyaan Mijuu (OBS) sagantaa Waldaan Qulqullootaa qopheessee itti kennu chaanaalii isaa irratti tamsaasuuf yoo ta’u tamsaasa kanas waliigalteen kun raawwatee ji’a tokko booda sadaasa 12/2008 akka eegalu ibsameera.
Saganataan dhiyaatus torbanitti guyya lama sanbata guddaa (dilbata) barfata sa’aatii 4:30 hanga 5:00 yoo ta’u irra deebiidhaan roobii ganama sa’aatii 12:30 hanga sa’aatii 1:00tti akka ta’e ibsameera.
Waldaan Qulqullootaa tajaajila Afaan Oromootiin kennamu babal’isuuf jecha miidiyaalee adda addaatiin carraaqaa waggoota hedduu kan lakkoofsise yoo ta’u haala addaatiin sagantaa kana babal’isuuf pirojeektii qopheessee miidiyaalee maxxansaa fi elektiroonikiisiin tajaajila kennuu eega eegalee waggaa tokko lakkoofsisuun isaa ni yaadatama.Tajaajilli televizhinii kunis qaama pirojeektii kanaa akka ta’e ibsameera.
Read more: Qulqulluu Paatriyaarikii Abbaan keenya Maatiyaas I Waggaa haaraa ilaalchisee Baga ittiin isin...